Mbola any am-ponja ilay mpanao gazety Nizeriana Omoyele Sowore noho ny fiampangana namboamboarina tamin’ny famadihana tanindrazana sy ny fanevatevana ny filoham-pirenena · Global Voices teny Malagasy
Nogadraina nandritra ny roa volana mahery i Sowore
Voadika ny 31 Oktobra 2019 3:09 GMT
Omoyele Sowore. Pikantsary tao amin'ny Democracy Now.
Roa volana mahery taorian'ny fitazonana azy, mbola any am-ponja ilay mpikatroka mpiaro ny zon'olombelona Nizeriana sady mpanao gazety Omoyele Sowore na dia teo aza ny didin'ny fitsarana tamin'ny famotsorana azy.
Nosamborin'ny Departemantam-panjakana misahana ny Fitsikilovana (DSS) tamin'ny 3 Aogositra 2019, tao Lagos, Nizeria i Sowore satria niantso fihetsiketsehana nasionaly izy ho ampahany tamin'ny hetsika #RevolisionaAnkehitriny izay natombony. Mpifaninana ho filoham-pirenena tamin'ny fifidianana ny volana Febroary 2019 i Sowore, izay lasan'ny filoha am-perinasa Muhammadu Buhari.
Vakio bebe kokoa: Mpikatroka Nizeriana nosamborina noho ny fanentanana hetsika nasionaly #RevolutionNow
Nanamarika ny fihetsiketsehana #RevolisionaAnkehitriny ho toy ny fikasana haka an-keriny ny fitondrana ny DSS. Tamin'ny 8 Aogositra, neken'ny fitsarana tao Abuja, izay notarihan'ny Mpitsara Taiwo Taiwo ny fangatahan'ny DSS hitazona an'i Sowore any am-ponja mandritra ny 45 andro mandritra ny fanaovan'izy ireo fanadihadiana.
Tamin'ny 23 Aogositra, mpiaro ny fahalalahan'ny asa fanaovan-gazety miisa 48, anisan'izany ny ekipan'ny Global Voices any Afrika Atsimon'i Sahara no nanao fangatahana tany amin'ny Firenena Mikambana (ONU) sy ny Vaomiera Afrikana misahana ny zon'Olombelona sy ny Vahoaka, mba hirotsaka an-tsehatra haingana amin'ny fiantohana ny famotsorana avy hatrany an'i Sowere. Nilaza ihany koa izy ireo fa fanitsakitsahana goavana ny zon'olombelona ananan'i Sowore sady fandrahonana ny fahalalahan'ny gazety any Nizeria ny fisamborana azy.
Vakio bebe kokoa: Nanao fangatahana tany amin'ny Firenena Mikambana sy ny Vondrona Afrikanina ireo mpiaro ny zon'olombelona noho ny fitazonana ilay Nizeriana mpitarika hetsi-panoherana
Tsy nisy nihaino anefa ireo fangatahana rehetra ireo satria dia mbola notanan'ny governemanta any am-ponja i Sowore.
Famadihana tanindrazana sy fanevatevana
Tamin'ny fiafaran'ny ny fotoana nitazonana an'i Sowore izay 45 andro nangatahan'ny DSS tany amin'ny fitsarana dia nametraka fiampangana namboamboarina izay milaza azy ho namadika tanindrazana, nanao fandrahonana an-tserasera ary nanao famotsiam-bola ny governemanta Nizeriana, tamin'ny 20 Septambra .
Araka ny voalazan'ny gazety an-tserasera CableNG dia voampanga ho namadika tanindrazana izy tamin'ny “fikarakarana ny fanentanana revolisiona tamin'ny 5 Septambra 2019, izay nikendry ny hanalana ny filoham-pirenena sy ny lehiben'ny komandin'ny Tafika Mitam-piadiana ao amin'ny Repoblika Federaly ao Nizeria”. Miatrika fiampangana famotsiam-bola tamin'ny famindrana ny “vola mitentina 19.975 dolara avy amin'ny kaontiny UBA ao amin'ny City Bank, New York, mankany amin'ny Orina Mpanasoa Sahara Reporters Media ” izy. Sowore no mpanao matoandahatsoratra ho an'ny Sahara Reporters, gazety an-tserasera mpanao fanadihadiana izay naoriny tamin'ny taona 2006. Voampanga tamin'ny fandrahonana an-tserasera ihany koa izy noho ny “fanevatevana, fandrafiana, fankahalana ary fanirian-dratsy manoloana ny filohan'ny Repoblika Federaly ao Nizeria.”
Ireo vesatra ireo dia voasazin'ny Lalàna Mandrara ny Famotsiam-bola taona 2011, ny Lalànan'ny Heloka An-tserasera tamin'ny taona 2012, ary ny Lalàna momba ny Heloka Bevava Nizeriana, [Cap. Lalàna C38 ao amin'ny Federasiona ao Nizeria, 2004].
Tsy nankatoa ny baikon'ny fitsarana
Mbola nanohitra ny baikon'ny fitsarana izay nitaky ny famotsorana an'i Sowore hatreto ny governemanta.
Tamin'ny 24 Septambra, io fitsarana ao Abuja io ihany izay notarihin'ny Mpitsra Taiwo Taiwo no nanome baiko ny famotsorana avy hatrany an'i Sowore ao amin'ny fonjan'ny DSS. Nilaza ny famotsorana avy hatrany an'i Sowore ny mpisolovavany, Femi Falana satria tapitra tamin'ny 21 Septambra ny didy izay manome fahefana ny DSS hitazona ny olony mandritra ny 45 andro. Saingy nilaza anefa ny Lehiben'ny Fampanoavana, G.O. Agbadua fa ara-dalàna ny fitazonana an'i Sowore any am-ponja satria nisy ny fiampangana azy tamin'ny 20 Septambra.
Na dia izany aza dia notsikerain'i Falana ny tenin'i Agbadua tamin'ny filazana fa “tsy tokony ho tanana ny olom-pirenena iray mialoha ny fiampangana azy.” Nandidy ny famotsorana ilay voafonja noho izany ny Mpitsara Taiwo.
Tsy narahin'ny DSS anefa izany baiko izany satria tsy naharay ny dika mitovy tamin'ity didim-pitsarana ity izy ireo. Nametraka fanamarihana momba ny fanitsakitsahan'ny DSS ny didim-pitsarana noho izany ireo mpisolovava an'i Sowore .
VAOVAO FARANY: Avotsory i Yele Sowore na mandehana any am-ponja hoy ny Fitsarana Avo Federaly tamin'ny DSS DG| Sahara Reporters
… Nibaiko ny lehiben'ny polisy misahana ny tsiambaratelo mba hanaraka ny torolàlana na hiatrika ny vokany dia ny “fonja” ny fitsarana.
VAKIO BEBE KOKOA: https://t.co/dFC5LJSGZr pic.twitter.com/5SRb2hNwz9
Tamin'ny 30 Septambra, mbola niakatra fitsarana indray i Sowore tamin'ny filazana fa firaisana tsikombakomba tamin'ny famadihana fanjakana , fandrahonana an-tserasera ary ny famotsiam-bola. Tsy niaiky ny helony tamin'ny fiampangana azy izy.
VAOVAO FARANY: Manao fampisehoana mahamenatra ny DSS , mitazona maharitra an'i Sowore ao amin'ny efitrano fitsarana | Sahara Reporters
Ny fanakanana ilay mpikatroka ny zon'olombelona tsy hiteny amin'ny mpanao gazety tao amin'ny efitrano fitsarana no fihetsika tsy voahevitra sy henjana nataon'ny polisy misahana ny tsiambaratelo.
VAKIO BEBE KOKOA: https://t.co/2spZXTzAsb pic.twitter.com/exgcDXOcAc
Tamin'ny 4 Oktobra, nanome fahafahana vonjimaika an'i Sowore ny Mpitsara Ijeoma Ojukwu avy ao amin'ny fitsarana ambony ao Abuja niaraka tamin'ny fandoavana onitra mitentina 100 tapitrisa naira (eo amin'ny 280.000 dolara Amerikana eo ho eo). Nangataka azy izy ireo mba hanolotra ny pasipaorony iraisampirenena ho an'ny manampahefana ary nandrara azy tsy hiteny tamin'ny mpanao gazety. Nahitana ny fandrarana azy tsy hivoka any ivelan'i Abuja ny fepetra hafa tamin'ity fahafahana vonjimaika ity.
Namaritra ny fepetra nampiarahana tamin'ny fahahana vonjimaika ho “hentitra” i Femi Falana, ilay mpisolovava an'i Sowore.
Tsy azon'ny governemanata atao ny manao fahazarana amin'ny tsy fankatoavana ny baikon'ny fitsarana kanefa manantena ny fiarovam-pirenena hihatsara. Misavoritaka ny zava-drehetra ao Nizeria satria mandà tsy hankatoa ny baikon'ny fitsarana ny governemanta.
Ny fizotry ny fotoam-pitsarana an'i Sowore
3 Aogositra : Nosamborina tany Ikeja, Lagos, Nizeria i Sowore.
8 Aogositra : Ny mpitsara Taiwo Taiwo ao amin'ny fitsarana Abuja dia nanaiky ny fangatahan'ny DSS amin'ny fitazonana an'i Sowore any am-ponja mandritra ny 45 andro mba hamitan'izy ireo ny fanadihadiana.
20 septambra : Nametraka ny fiampangana an'i Sowore noho ny fampihorohoroana, ny heloka an-tserasera ary ny fanohintohinana ny filoham-pirenena ny governemanta Nizeriana.
24 Septambra : Nanome baiko ny famotsorana an'i Sowore ny Mpitsara Taiwo.
26 septambra : Nilaza ny DSS – sampan-draharaha misahana ny tsiambaratelo Nizeriana fa tsy afaka avotsotra i Sowore satria tsy nahazo ny dika mitovy tamin'ny baikon'ny fitsarana izy ireo; Nandefa fampilazana momba fanitsakitsahan'ny DSS ny didim-pitsarana ireo mpisolovava an'i Sowore .
30 Septambra : Niakatra fitsarana indray i Sowore, ary tsy niaiky ny helony tamin'ny fampihorohoroana sy tamin'ny fanevatevana ny filoha sy ireo fiampangana hafa.
4 Oktobra : Nomen'ny Mpitsara Ijeoma Ojukwu ao amin'ny fitsarana Abuja fahafahana vonjimaika i Sowore, niaraka tamin'ny onitra mitentina 100 tapitrisa naira; ary nangatahana hanome ny pasipaorony iraisampirenena, voarara tsy hiteny tamin'ny mpanao gazety, ankoatra ny fepetra henjana hafa nifandraika tamin'ny fahafahana vonjimaika.
Tsy nilefitra tamin'ny antso nataon'ireo fikambanana iraisam-pirenena tamin'ny fanafahana an'i Sowore ny governemanta Nizeriana .
Niantso ny governemanta mba hisintona ny fiampangana hanenjehana an'ilay “mpanao gazety fanta-daza eran'izao tontolo izao” sy mba “hanafaka azy tsy misy hatak'andro ilay mpahay toekarena Amerikana Phelps Edmund niaraka tamin'ny akademika sy mpikatroka miisa 72″
Tahaka izany ihany koa, nanavao ny antson'izy ireo tany amin'ny Firenena Mikambana sy ny Vondrona Afrikana mba hanery ny governemanta Nizeriana hamoaka an'i Sowore ireo fikambanana mpiaro ny zon'olombelona miisa 50, anisan'izany ny Global Voices any Afrika Atsimon'i Sahara (GVSSA).
Tao amin'ny sombin-kevitra iray navoaka tao amin'ny Premium Times ny 23 Septambra, namintina ny fihetseham-pon'ny olona maro momba ny asan'i Sowore ilay mpanao gazety Nizeriana Fisayo Soyombo:
Hiresaka momba an'i Sowore aho na higadra aho na tsia? Mampihomehy ny fiampangana an'i Sowore amin'ny ‘faniratsirana’ ny filoham-pirenena izay fanararaotam-pahefana tanteraka avy amin'ny fitondrana federaly sady manambany ny asan'ny filoha ho fozaorana. Manaratsy ny fitondrana matetika i Sowore, eny, saingy maro amin'ireo na izay tsy nanaiky ny safidiny aza no matetika miaiky fa mari-pototra ny famelabelarany. Matetika izy no mametaka anarana ny mpitondra hoe ‘mpangalatra’, moa ve lainga izany? Tiany ny namaritana io governemanta io ho ‘tsy mahomby», tsy marina ve izany? Ary vaovao ve izany? Tsy izany ve ny teny malaza hilazantsika an'i Jonathan rehefa mbola eo amin'ny fitondrana izy? Soa ihany fa tsy ho eo amin'ny fitondrana mandrakizay ilay mpanao didy jadona Buhari. Telo taona sisa dia ho tapitra ny fanjakany.